WARARKA SUUQA KALA IIBSIGA CIYAARTOYGA
July 18, 2019 8:30 pm in Ciyaaraha. by Abdi fatah Ciir.
Weeraryahanka Ivory Coast Wilfried Zaha ayaa u sheegay Crystal Palace inuu doonayo inuu kooxda isaga tago xilli Arsenal laga diiday dalab 40 milyan ginni ah oo ay ka gudbisay weeraryahankaan. (Sky Sports)
Paris Saint-Germain ayaa hogaamineysa tartanka loogu jiro saxiixa daafaca Tottenham Danny Rose kaasoo aan ku jirin kooxda Spurs ee u safartay Singapore. Tottenham waxay daafaca ku dooneysaa 20 milyan ginni iyadoo hal milyan ginni kaga soo iibsaday Leeds sannadii 2007. (Sky Sports)
Arsemal ayaa dhakhtar u dirtay Brazil si uu tijaabada caafimaadka u mariyo xiddiga garabka ka ciyaara Everton Soares ee kooxda Gremio, xiddigaan 23 jirka ah ayaa ku dhow inay dhameystiro heshiis 36 milyan ginni ah. (The Sun)
Kulan ay yeesheen madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez, agaasime Jose Angel Sanchez iyo tababare Zidane ayaa looga hadlay baahida ay kooxda u qabto inay xoojiso khadka dhexe. Pogba ayaa weli ah ciyaaryahan uu tababare Zidane doonayo laakiin haddii soo iibsashadiisa ay adkaato waxay u dhaqaaqi doonaan midkood Eriksen ama Van de Beek.(Marca)
Neymar ayaa filanaya inuu war rasmi ah ka helo mustaqbalkiisa labada ama seddexda isbuuc ee soo socota iyadoo wakiiladiisa ay ku rajo weyn yihiin inuu xagaagan ka tago Paris Saint-Germain. (Marca)
Manchester United ayaa durbaba raadineysa bedelka weeraryahanka reer Belgium Romelu Lukaku kaasoo la filayo inuu ku biiro Inter Milan, waxaana ay dalab 62 milyan euro ka gudbiyeen weeraryahanka Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. (Daily Express)
Inter Milan ayaa u soo bandhigtay Romelu Lukaku qandaraas shan sannadood ah oo uu wadar ahaan mushahar u qaadanayo 41 milyan ginni, oo ay sii dheer tahay lacago abaalmarin ah, waa haddii ay ka dhaadhiciyaan Manchester United inay iibiso weeraryahanka. (Sky Sports)
Weeraryahanka PSG Edinson Cavani ayaa u soo muuqday mid diirada u saaran kooxda Inter Milan haddii ay weyso weeraryahan Romelu Lukaku iyadoo Manchester United ay diidan tahay inay aqbasho lacag ka yar 88 milyan euro. (Tuttosport)
Kooxda Fiorentina ayaa xiiseyneysa saxixia Fernando Llorente. Weeraryahanka ayaa ka fiirsanaya dhamaan dalabyada u imaanaya iyadoo ay ku jirto hal xilli ciyaareed kale oo uu sii joogi karo Tottenham. (Sky Italia)
RASMI: Atletico Madrid ayaa la soo wareegtay daafaca dhexe ee kooxda Espanyol Mario Hermoso kaasoo u saxiixay qandaraas shan sannadood ah, waxaana uu 24 jirkaan uu sidoo kale ka ciyaari karaa garbaha daafac.
Atletico Madrid ayaa dooneysa inay diirada saarto soo xerogelinta James Rodriguez oo ay ka dhigto saxiixeeda ugu weyn xagaagan. Ka dib imaanshiyaha Keiran Trippier iyo Mario Hermoso ee isbuucaan, tababare Diego Simeone ayaa rajeynaya inuu sii wado dib u dhiska kooxdiisa oo uu Napoli ka dulqaado saxiixa xiddiga reer Colombia. (Marca)
Inkastoo uu ciyaaraha ka fariistay, Ronaldinho ayaa si lama filaan ah ugu soo laabanaya kubada cagta isagoo ka ciyaaraya Malta. Kooxda Birkirkara ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto xiddiga reer Brazil xagaagan. (Argument)
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa loogu baaqay inuu iska daayo dib u la soo wareegista Philippe Coutinho oo uu u dhaqaaqo saaxiibkiisa Barcelona Ousmane Dembele, waxa uu taladaas ka helay xiddigii hore ee Liverpool Danny Murphy oo sheegay in Coutinho uu gadaal u celin doono Reds.